On oct 28, 2019 3 270
16 mirahalahy mianaka, voarohirohy ho nandray anjara mivantana sy ankolaka tamin’ny doro trano sy vono olona mahatsiravina tany Behenjy, ny sabotsy 2O oktobra 2019 no naiditra am-ponja vonjimaika ao Tsiafahy, ny faran’ny herinandro lasa teo.
» Raha tsiahivina dia nisy andian-jiolahy miisa 8, mirongo fiadiana, nanafika tanàna roa mielanelana 7 kilometatra: Antanetilava sy Soamanarivo, samy fokontany Ambohidrano kaominina Behenjy Distrika Ambatolampy. Tonga tao anatin’ny fotoana fohy ny zandary efadahy notarihin’ny GPHC ANDRIANIRIANTSOA Winà avy ao amin’ny PA Behenjy, rehefa nahazo antso indroa misesy. Tamin’ny 10 h 30 alina (antso 40 min taorian’ny fanafihana voalohany) sy tamin’ny 00 h 30 (antso 15 taorian’ny fanafihana faharoa). Namoy ny ainy tamin’io fanafihana io moa Atoa Jocelyn RAHARINJANAHARY, mpivarotra ao Antanetilava, rehefa voan’ny tifitry ny basin’ireo malaso. Nifindra tao Soamanarivo indray ireo malaso ka nodorany ny trano fonenan’i Rtoa Lydia RAZAFIARIMANANA mpivarotra rehefa avy norobain’izy ireo. Namoy ny ainy vokatry ny hasemporana kosa io vehivavy io sy ny zanany telo. », hoy ny fanambarana azo avy amin’ny kaompanian’ny Zandariamaria tarihin’ny Jaona MARIKA RAKOTOARIMANANA sy ny zandary lehiben’ny famotorana na ny Gapj avy ao Vakinankaratra, tarihin’ny Lietnà Raphaël ANDRIAMIHAJA.
Taorian’ny fanadihadiana natao, andro vitsy dia tra-tehaka avokoa ireo noheverina ho tompon’antoka voalohany, nanaraka avieo ny mpiray tsikombakomba rehetra ka nahatonga ny olona voasambotra ho 16. Manoloana ny vokatra tsara sy aingana azon’izy ireo, manao antso avo amin’ny vahoaka hatrany ny zandarimariam-pirenena mba tsy hiandry ela amin’ny fampandrenesana azy ireo raha vao misy ny tranga.
Marihina fa efa miverina amin’ny laoniny ary azo antsoina amin’ny laharana finday rehetra ihany koa ny laharana maintso 119, an’ny zandariamariam-pirenena manerana ny nosy, azo antsoina maimaim-poana.
Ankoatra izay, manentana ny olona mba hanao andrimasom-pokonolona na ny « AUTO-DEFENSE VILLAGEOISE » ny mpitandro filaminana.
VONIZONGO 2019: VONONA TANTERAKA AMIN’NY IRAKA FAMPANDRIANTANY ANY IVELANY NY TAFIKA MALAGASY
CANADA-MADAGASCAR: RENCONTRE ENTRE ANDRY RAJOELINA ET JUSTIN TRUDEAU